Maitiro ekurodha pasi iTunes yeLinux | Kubva kuLinux | Kubva kuLinux
apuro zuva rega rega rinopfuura riri kurasikirwa zvishoma zvemashiripitiMukufunga kwangu), zvisinei, vazhinji vane yavo iPhone, iPod o iPad uye vanoshandisa iTunes seye chishandiso chekutanga chekuyananisa mumhanzi, mafirimu uye imwe data kubva kumakomputa ako kuenda kune nhare mbozha. Saizvozvo, iTunes chishandiso chakakwana kutenga kana kuteerera mimhanzi kubva Apple Music. Uye izvo chaizvo zvakanaka kune vashandisi veMac OS neWindows, ayo ese ane mavhezheni eTunes. Asi zvakadiniko neLinux? ¿Iko kune iTunes yeLinux?
Mhinduro yakapusa ndeiyi. Apple haina vhezheni yeTunes iyo inogona kumhanya natively paLinux. Asi izvi hazvireve kuti hazvigoneke kumhanyisa iTunes paLinux, asi asi kuti mamwe maitiro anofanira kuitwa kuti umhanye.
1 Isa iTunes newaini
2 Isa iTunes muVirtualBox
3 Dzimwe nzira dzeTunes paLinux
4 Apple ichaburitsa iTunes yeLinux?
Isa iTunes newaini
Nzira yakanakisa yekuita kuti ishande iTunes paLinux es waini, chirongwa chinowedzera chinowirirana chinobvumidza iwe kumhanya Windows zvirongwa paLinux. Kuisa iTunes newaini iwe unofanirwa kuita anotevera matanho:
Isa Waini. Kune izvi iwe unogona kushandisa ekuisa mapakeji eakasiyana ma distros aunogona kuwana kubva pano.
Tarisa kuti yako vhezheni yeLinux haidi chero maturusi eTunes kana mafaera ayo kuti aiswe. Chishandiso chatinokurudzira kuisa nekuti zvichabatsira kuisa iTunes iri Playonlinux .
Dhawunorodha vhezheni yazvino iTunes kubva pano (iTunes 12.5.4 izvozvi), kunyangwe kana iwe uine chero matambudziko ekuisa muwaini, unogona zvakare kurodha yapfuura vhezheni kubva pano.
Mhanya iyo iTunes installer nekudzvanya kaviri, ichaisa senguva dzose muWindows.
Nakidzwa iTunes paLinux, nekukurumidza uye nyore.
Iyi nzira inogona kusashanda pane yako yaunofarira kugoverwa kweLinux, ini ndakazviongorora paLinux Mint 18.1 uye Zorin Os Ekupedzisira.
Isa iTunes muVirtualBox
Nzira yechipiri yekuwana iTunes yeLinux haina kushomeka asi inofanira kushanda mushe.
Iyi nzira inoda gadza VirtualBox. VirtualBox chishandiso chemahara virtualization iyo inoteedzera iyo chaiyo Hardware yekombuta uye inokutendera iwe kuisa anoshanda masystem uye zvirongwa pairi. Izvi zvinokutendera iwe, semuenzaniso, kumhanya Windows kubva kuLinux.
Iwe unofanirwa kuve neshanduro yeWindows iripo kuti uise muVirtualBox (izvi zvingangoda Windows yekumisikidza disc). Uye wobva watevera anotevera matanho:
Dhawunirodha VirtualBox yekugovera kwako Linux.
Isa VirtualBox paLinux
Mhanya VirtualBox uye uteedzere rairo pachiratidziro kuti ugadzire Windows chaiyo muchina Izvi zvinogona kuda kuti maWindows ekuisa discs
Mushure mekunge Windows yatanga, tora iTunes kubva pano (iTunes 12.5.4 izvozvi).
Isa iTunes paWindows nenzira yakajairwa.
Chaizvoizvo nenzira iyi hausi kumhanya iTunes paLinux, asi urikupa mukana wekuwana iTunes uye maficha ayo kubva kuLinux komputa.
Maitiro ese ari maviri ari echinyakare asi ndiwo mhinduro dzakanakisa kudzamara Apple yaburitsa vhezheni ye iTunes yeLinux.
Dzimwe nzira dzeTunes paLinux
Kunyangwe iTunes chiri chishandiso chakanakisa kuwiriranisa multimedia pakati peApple nharembozha nemakomputa, muLinux mune dzimwe nzira dzinoverengeka kune ino application, iyo inogona kusangana nezvinodiwa zvaunoda.
Pakati pavo tinogona kuratidza:
Es mutambi akanyanya kufanana neTunessezvo iine zvakawanda maficha mairi uye inokutendera kuti uenzanise iPod nemamwe ma multimedia zvishandiso nemumhanzi uye vhidhiyo raibhurari.
Ndicho chine simba mumhanzi browser, unogona kuronga / kutsvaga mimhanzi angangoita mafomati ese anozivikanwa, kusanganisira kutepfenyura odhiyo, unogona kutamba nekupisa maCD nemaDVD.
Chimwe chezvinhu zvakakosha zveRhythmbox ndeye rutsigiro rwainopa rwePods, ichitsiva zvachose iTunes.
Iyo inoridza mimhanzi ine maficha makuru, parizvino inoonekwa seine simba kwazvo inowanikwa yeLinux.
Amarok zvinoita kuti zvikwanisike kuendesa mafaera kuPod uye nevamwe ma mp3 vatambi, tenga mimhanzi zviri pamutemo, gadzira zvine simba playlists, kupinza dhatabhesi kubva kuTunes, uye zvimwe zvakawanda.
Apple ichaburitsa iTunes yeLinux?
Zvese izvi zvinotitungamira kumubvunzo: Ko Apple ichaburitsa vhezheni yeTunes yeLinux?Kazhinji kutaura, Apple haiburitse shanduro dzayo mubairo zvirongwa zveLinux, saka ndinofungidzira kuti tichazomboona iMovie kana iTunes yeLinux.
Iye zvino nekufamba kwazvino kubva kuMicrosoft, madhairekisheni matsva eApple uye nekukurumidza kukura kwekushandiswa kweLinux, isu tiri pamwe mukumhanyisa-kuvhurwa kweTunes yeLinux kana imwe sisitimu inoshanda kana nzira yekufananidza yedu iPhone pamakomputa eLinux. .
mabviro: bvunza Ubuntu & pamusoro
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Dzidziso / Mabhuku / Matipi » Mashandisiro ekushandisa iTunes paLinux
Nhasi hapana nzira yekuisa iTunes pane linux kana nekutamba pane linux, iine Virtual bhokisi inodzokera kumashure uye haitenderi kuwiriranisa nekugadzirisa mimhanzi ye iPhone ine banshee kana rythmbox neshanduro nyowani dzeIOS hazvigoneke. Kunyanya nhasi tinogona kuona mafoto echishandiso uye dzimwe nguva chinokundikana kupfuura chero chimwe chinhu.Wakave wakamboedza chero nzira dzaunotaura?
Ndakaedza nzira mbiri, zvese ndichizviita neshanduro dzekare dzeshanduro yazvino yaunotora kubva pano http://www.oldapps.com/. Ndine ipod nano (pamwe chimwe chinhu chekare chetekinoroji iyo inobatwa parizvino, asi mune iyo kesi inoshanda zvakakwana).
Nehurombo, ndanga ndakamirira iTunes ye linux kwemakore mazhinji. Uye seTeamViewer, Skype, uye nevamwe vazhinji, rutsigiro rwucharamba ruri rwepakati.
Ndakafungawo kuti ne = Android) rutsigiro rwese ruchasimukira asi hapana zvachinja. Ndinovimba ivo vakasungirirwa neiyo yaSteamOS, yatove mashoma kune iwo anotonga ...
Nedzimbo dzazvino dzeUbuntu uye zvigadzirwa zvaro, ini handina kana kukwanisa kuridza mp3 mafaera kubva kune inofamba iPod touch chero. Mune mindi 17.2 uye 3 kuburikidza nekushinga kana zvave zvichikwanisika kubereka, mafaera aya; hapana chimwe.
Pindura kuna hernando
Marty mcfly akadaro
Ndinovimba rimwe zuva vazhinji vachazoona kuti Apple ndiyo kenza hombe mukomputa ...
Pindura kuna Marty Mcfly
Gtkpod uye pasina matambudziko neiyo yakasarudzika iPod.
Tichave tichiziva nezvazvo, tinotarisira kuti rimwe zuva rinosvika kuLinux, rakaomarara asi hei hazvigoneke
Iwe wakanyora izvi makore mana apfuura uye havasati vaita chero chinhu parizvino.
Chinhu chakareruka sekutakura iTunes kuenda kuQt kana GTK.
Microsoft yakazviita ne Skype uye izvi Apple bums hazvina kufambisa munwe mumakore mana kuitira kuti vashandisi veLinux vakwanise kushandisa iPod.
zvakanaka kwazvo, kwandiri ndine kusahadzika kunotevera:
Ini ndinoshandisa iTunes kazhinji nekuti zvakanditorera makore akati wandei kuti ndigadzire tsika dzekutamba dzemimhanzi yese yandinayo. Pandakachinja kubva kune imwe Mac ndichienda pane imwe, zvakange zvakaringana kuti ini nditeedzere mafaera ese ari muTunes folda kubva pakombuta yekare kuenda kune iyo komputa nyowani, kuitira kuti zvese zvinyorwa zvioneke otomatiki sezvavakagadzirwa.
Chingave chimwe chezvirongwa izvi chinotsigira zvinyorwa zvemunhu zvinoenderana neangu atogadzirwa iTunes playlists uye otomatiki kuzviziva kana uchiteedzera / kunama mafaera?
NDATENDA ZVAKANAKA POSI, yatove kubatsira pachayo.
osTicket: Iyo Yakanakisa Vhura Sosi Tiketi Sisitimu